. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: September 2009
မိုးခါးမှာ အမြင်ကတ်စရာ တွေကတော့ မျက်နှာကြောတင်းတာက စပြောရမယ်ထင်တယ် .. :P
စူပုတ်နေတာပဲတဲ့ .. ကိုယ့်ဟာကိုယ် တယောက်တည်းနေရင်း ရီနေရင် အရူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ .. :P .. ဒီတော့ မိုးခါးတို့ မျက်နှာက တယောက်တည်းဆိုရင် တလောကလုံး တင်ကျွေးထားရသလို မျက်နှာမျိုးပါ .. :D
ပြီးစိတ်တိုလွယ်တာကလည်း တော်တော် အမြင်ကတ်ဖို့ ကောင်းပါတယ် .. စိတ်က တိုပြီဆိုရင် နထင်မှာက တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ ဒေါသတွေ အလိပ်လိုက် ထွက်တတ်တာ .. (ဘယ်အချိန် ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်ပြီး လျှောမလဲ မသိဘူး .. :P) စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင် မျက်နှာက ပြင်လို့မရတော့ဘူး .. ဟန်ဆောင်ပြီးတောင် ရီပြလို့ မရတော့ဘူး .. စကားလည်း ပြောမထွက်တော့ဘူး .. ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး အကုန်လုံးကို ကိုင်ဆောင့်ချင်စိတ်ကို ပေါက်နေတာ .. အဲဒီအချိန် မြင်တဲ့သူက တော်တော်ကို အမြင်ကတ်မှာ .. ဟိုနေ့ကပဲ ခေါင်သူကြီးနဲ့ ဖြစ်ပြီးဘီ :P ..
တချို့က ပြောတယ် .. မိုးခါး စကားပြောတာ ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးတဲ့ .. ကန့်လန့်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါတယ် .. ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခင်မင်တယ် ရင်းနှီးတယ် ခံစားရရင် စိတ်ထဲဖြစ်သလို ပြောချလိုက်တာ .. နောက်လိုက်တာမျိုးကလဲ တချို့အတွက်တော့ ကျောတောတောနဲ့ အမြင်ကတ်စရာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် .. တကယ်ကတော့ ဒါက ခင်တဲ့လူတွေကိုမို့ ပြောတာပါ .. :D
မိုးခါးက အတေးအမှတ်ကြီးတယ်ပြောရမယ် .. ကိုယ့်ကိုပြောသွားတာ လုပ်သွားတာ မမေ့ဘူး .. မေ့ထားရင်တောင် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ပြန်ပြန်သတိရတာပဲ .. ဒါက ကိုယ့်ကို မကြိုက်တဲ့ အမြင်ကတ်တဲ့ အချက် ..
နောက်တခုက စည်းကမ်းမရှိတာ .. ပစ္စည်းကို တန်ဖိုး မထားတာ .. မိုးခါးတို့ လုံးဝ စည်းကမ်းမရှိပါဘူး .. (ဒီဘလော့ကို ကြာကြာဆက်ရေးမယ်ဆို တကယ်ပဲ ယူမယ့်သူမရှိ ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ် .. :P) မိုးခါး လက်ထဲမှာ ဘယ်ပစ္စည်းမှ ကြာကြာမခံဘူး .. ၀ယ်ပြီးပြီးချင်း ခဏပဲ .. နဲနဲကြာပြီဆို ပစ္စည်းကို ထားချင်တဲ့ နေရာထားတယ် .. လိုရင် မရှိတော့ဘူး .. အဲဒီအကျင့်ကို မကြိုက်ဘူး .. ဒါပေမယ့် လုပ်မိနေတုန်းပဲ .. ဒါကတော့ ကိုယ့်ကို အမြင်ကတ်တာပါ ..
ဘာကျန်သေးလဲ မသိဘူး .. တခါတလေ ကိုယ့်ကို တော်တော် အမြင်ကတ်ပါတယ် .. အမကလည်း ပြောတယ် .. "မီးငယ် ငါနင့်ကို တော်တော် အမြင်ကတ်တယ်" တဲ့ .. သူ့ကို ကန့်လန့် လုပ်တဲ့ အချိန် .. ဘုကန့်လန့် ပြောတဲ့ အချိန် .. စကားနားမထောင်တဲ့ အချိန် .. :D
ဒါက စလုံးပေါင်ချိန်တဲ့ သူ့ကိုယ်သူ (အဆိပ်ခွက်) က တဂ်တာပါ .. ခုတော့ သူလုပ်တာနဲ့ ဖွရပြီ ..
၀ံလေးက အကြိုက်ဆုံး ဘလော့ ငါးခုလည်း တဂ်ထားပါတယ် .. ဒါက တော်တော် ရွေးရခက်ပါတယ် .. ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်မှာစိုးလို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး .. (၀ံလေး သိချင်ရင် အမ ဆိုက်ဘားမှာ တင်ထားတဲ့ ဘလော့တွေ သွားကြည့်လိုက်နော် .. အကုန် ဖတ်ချင်လို့ လင့်ထားတာလေ .. ရေးသမျှ သိရအောင် မှတ်ထားတာ .. :D) အဲလိုလေးပဲ ဖတ်မှတ်လိုက်တော့နော် .. :D
ခုတလောလည်း စာတွေပဲ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တာများပြီး စာ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူး .. စိတ်ထဲမှာ ခံနေတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းတွေရယ် တချို့ အဖြစ် အပျက်တွေရယ်က တော်တော် ရင်ခံစေပါတယ် .. စာရေးမယ်ဆို ရေးမထွက်ပါဘူး .. ရေးချင်တာတောင် ခံစားချက်ကို လိုက်မမီဘူး ဖြစ်နေတယ် ..
နောက်တခုကလည်း ဦးလေးတွေ ရန်ကုန်ကနေ ရောက်နေသေးတော့ ဧည့်ခံနေရသေးတယ် .. ဘီးဇီးဗျို့ :D
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/29/2009 05:11:00 PM 25 comments:
ညဘက် တရေးနိုးချိန် ဖုန်းကို သတိတရ ကြည့်လိုက်မိတော့ မချိုမချဉ်နဲ့ ကိုယ့်ပြန်ကြည့်နေတဲ့ ကိုယ့်ပုံကို တွေ့တယ် .. စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ကာတွန်းပုံ ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ် .. နာရီကို ကြည့်တော့ ၅ နာရီခွဲ .. မျက်လုံးကလည်း ကြည်လို့ .. အိပ်ရာက ထရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားပေမယ့် အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချချင်စိတ်ကြောင့် အတင်းစွတ်မှိတ်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်တယ် .. မတွေးပဲလဲ ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလဲ ခေါင်းကိုခါပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ် ..
အလန်းသံကတော့ တတီတီနဲ့ အချက်ပေးနေပါပြီ .. ခုနက ထလိုက်မိကောင်းသား .. ခုနက ကြည်နေတဲ့ အမြင်တွေလည်း ပြန်လည် နောက်ကျိလို့ .. ရောဂါက စပြီ .. အပျင်းရောဂါ .. ဘယ်ခလုတ်တွေ ဘယ်လိုနှိပ်မိတယ် မသိဘူး .. အသံက ထထမြည်တာ မပြီးနိုင် .. နှိပ်ရော နှိပ်မိရဲ့လားမသိ .. နာရီကြည့်လိုက် ပြန်အိပ်လိုက်နဲ့ ၁၆ ခါလောက် လုပ်အပြီးမှာ ၆နာရီက ခွဲနေပြီ .. နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ လူးလဲ ထလိုက်တယ် ..
မဆီမဆိုင် အိပ်မက်ထဲမှာ လူစုံတက်စုံ ထည့်မက်တာကို သတိရသွားသေးတယ် .. ဘာတွေဘယ်လို မက်တယ်တော့ စဉ်းစား မရတော့ .. ပြန်သတိရအောင် ပြန်အိပ်လိုက်ရကောင်းမလား ..
အမဖြစ်သူ အခန်းထဲဝင်လာမှ အတင်း ကုန်းရုန်းထ .. ရေချိုးခန်းဘက်ပြေး .. အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ ၇နာရီ ထိုးဖို့ မိနစ် အနည်းငယ်သာ လိုပါတော့တယ် .. သွားရပြန်ဦးမယ် .. တွေ့ရပြန်ဦးမယ် ..
ထွက်ခါနီး ဘုရားစင်ရှေ့ထိုင် .. တတ်တာလေးတွေ ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ ..
အိမ်တခါးကိုဖွင့် နေ့ရက် သစ်တခုကို အစပြု .. ဘတ်စ်ကားဂိတ်သွားရာ လမ်းတလျှောက် လမ်းကစိုတိုတိုမို့ စိတ်က ချဉ်ချဉ်နဲ့ လမ်းကိုပဲ မျက်စောင်းပစ်ထိုးလိုက်တယ် ..
ဒီနေရာရောက်တိုင်း ပြုံးချင်မိတာက အမြဲတမ်း ကြောင်ပေါက်လေး တကောင်မဟုတ် တကောင်ရှိတယ် .. တကောင်တည်းဆို ဟိုဟာလျှောက်နမ်း ဒီဟာလျှောက်နမ်း .. ကိုယ်က ချွတ်ချွတ်ခေါ်လည်း လှည့်ကြည့်ဖို့ ကောင်းမှန်း မသိတဲ့ဟာလေးတွေ .. နှစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ တကောင်နဲ့ တကောင် ပါးရိုက်ရင်ရိုက် .. မဟုတ်လည်း အမြီးကို ကိုက်ပြီး ဆော့နေကြတာ .. ကြောင်ပေါက်လေးတွေကိုတော့ ချစ်တယ် .. ကြီးရင် မချစ်တော့ပါ ..
ကားဂိတ်မှာ အမြဲတွေ့နေကျ စိတ်မူမမှန်တဲ့လူကြီးကလည်း ထုံးစံအတိုင်း ဟိုဘက်လျှောက် ဒီဘက်လျှောက် .. လူတွေကို ကြည့်ရတာလည်း မလန်း မဆန်း .. ငိုက်မြည်းနေကြတယ် ..
လမ်းတလျှောက်လုံး ဘုရားစာရွတ်ရင်းကကို စိတ်က ဟိုရောက် ဒီရောက် .. ရာသီဥတုကြီးကလည်း ခံစားလို့ မရလိုက်တာ .. စိုစွတ်စွတ် အုံ့မှိုင်းမှိုင်း .. ငါမလွမ်းချင်ပါဘူးဆိုမှ ..း(
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/17/2009 10:46:00 AM 31 comments:
ကျမဘ၀မှာ သိပ်ပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေ မကြုံတွေ့ခဲ့သလိုပဲ ချစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း မထူးဆန်းခဲ့ပါဘူး .. စစချင်း ခင်တယ် .. နောက်တော့ ပြောရင်းဆိုရင်း ဆက်ဆံမှုတွေ နွေးထွေးခဲ့တယ် .. နောက် သံယောဇဉ်တွေ သူများတွေထက်ပိုပြီး ချစ်သွားတယ် .. ဒီလောက် ရိုးရှင်းပါတယ် .. နောက်ထပ်လည်း ဆန်းပြားမယ့် ကိစ္စတွေသာ ရှိမလာခဲ့ရင် ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားဖြစ်ပါဦးမယ် ..
လူတိုင်းမှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ရှိကြတယ် .. ကျမမှာလည်း သာမန် ဆန္ဒတွေ ရှိပါတယ် .. ဘ၀ကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မပူပင်ပဲ ဖြတ်သန်းသွားချင်တယ် .. ကျမတို့ နှစ်ယောက်ရှိမယ့် ကမ္ဘာလေးမှာ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တာတွေရှိမယ် .. ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ကြင်နာနေချိန်တွေရှိမယ် .. ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောဖြစ်မယ့် အချိန်တွေရှိမယ် .. အငြင်းပွားမယ့် အချိန်တွေ ရှိမယ် .. ဘယ်လို အခြေအနေ ဘယ်လို အချိန်အခါမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ လိုအပ်နေချိန်မှာ ကျမ အတွက် သူရှိနေမယ် သူ့အတွက် ကျမ ရှိနေချင်တယ် .. လောဘမကြီးဘူး ထင်ပါတယ် .. ကျမ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းချင်မိပါတယ် ..
ဘယ်အရာမှ တရားသေ တွက်ခွင့်မရှိတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးမှာ ကျမတို့လည်း အခြေအနေပေါင်းစုံ ကြုံတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ .. ဒီလိုတွေးလို့ ကျမ အဆိုးမြင်သူတယောက်လို့ စွပ်စွဲနေချင်သေးလား .. အဆိုးမြင်တယ်လို့တော့ မသုံးသတ်မိဘူး .. ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အရာတွေကို ကြို စဉ်းစားမိတာပါ .. ဒါလည်း ကျမ အကျင့်တခုပါပဲ .. ဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါစေ ကျမ မတုန်လှုပ်ချင်မိဘူး .. ဒီလိုနဲ့ ကျမစဉ်းစားတတ်လာတာက ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်လာခဲ့ရင် အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ .. တကယ်လို့များလို့ မတွေးချင်ပေမယ့် ကျမ တွေးမိတယ် .. ကံတရားကိုပဲ အပြစ်ပုံ မချပါဘူး .. ကျမလုပ်ရပ်လည်း ထပ်တူ ပါဝင်နေပါလိမ့်မယ် ..
ဒီလိုတွေးလို့ သိပ်ရင့်ကျက်နေတာလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး .. ကျမ အတ္တတွေ ကြီးနေခဲ့တာ ကိုယ်တိုင် သိနေခဲ့ပါတယ် .. ထိန်းသိမ်းထားပါစေ .. ကျမပိုင်ဆိုင်နိုင်တာ ဒါလေးပဲ ရှိလို့ပါ .. မကောင်းဘူးဆိုတာလည်း သိပါတယ် .. ကျမကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်တာ ဒါလေးပဲ ရှိလို့ပါ .. တချို့ ပြောတာ ကြားဖူးတယ် .. မသိတဲ့လူထက် သိရဲ့နဲ့ ဆက်လုပ်နေတဲ့လူကို ပိုပြောရခက်သတဲ့လေ .. ကျမ များ ပါနေပြီလား ..
ဖြစ်နိုင်မယ် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ .. အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမှာ သက်ဆုံးထိ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တယောက်ကိုတယောက် ဖေးမ ကူညီရင်း ဖြတ်သန်းသွားချင်ပါတယ် ..
ကျမအတွက် အချစ်ဆိုတာ ဘာပါလို့ ပြောဖို့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ခုစဉ်းစားလေ ပိုသေချာလေပါပဲ .. အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အချစ်ဆိုတာကို ကျမ အယုံအကြည်မရှိတာ တော်တော် ကြာနေပါပြီ .. ၁၀ ကျော်သက်တုန်းကတော့ ချစ်တယ် ဒါကို အချစ်လို့ ထင်မှတ်မှားခဲ့ပေမယ့် အချိန်ကြာလေ မှုန်ဝါးလေပါပဲ .. ကျမ ယုံကြည်တာ သံယောဇဉ်နဲ့ နားလည်မှု .. ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပြောပြော ကျမ သူ့ကို ချစ်ပါတယ် ..
အချိန်အားတိုင်း သူ့အကြောင်း စဉ်းစားမိတာ .. စိတ်က သူ့ အနား ရောက်ရောက်နေတတ်တာ .. ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူ့အကြောင်းတွေ ပြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရတာ .. ဒါတွေက သူ့ကို ချစ်လို့ ဆိုရင် ကျမ သူ့ကို ချစ်ပါတယ် .. သူ့ပါးစပ်က တခြားမိန်းကလေးအကြောင်း မကြားချင်ဘူး .. ဒါဟာ သ၀န်တိုတယ်ဆိုရင် အရမ်း သ၀န်တိုပါတယ် .. ချစ်လို့လည်း သ၀န်တိုတယ် ထင်ပါတယ် .. (ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ .. ချစ်လို့ သ၀န်တိုတာနော် .. မချစ်လို့ကတော့ လှည့်ကို မကြည့်ဘူး .. :P) ကျမစိတ်က အကုန်ရချင်တာ .. လောဘက အဲလို ကြီးပါတယ် ..
တခု ခက်နေပြန်တာက ကျမက ချစ်မပြတတ်တာ .. ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းကို မမေးပဲ မပြောတတ်တာ .. မေးရင်တောင် အူကြောင်ကြောင် လုပ်ပြီး ပြောချင်မှ ပြောတတ်တာ .. ဖာသိဖာသာ နေတတ်တာ .. နင်ဘာလုပ်လုပ် ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး သွင်းထားတတ်တာ ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် သူကတော့ ကျမချစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်ဖို့ ခက်နေမှာပါပဲ .. ကျမ ချစ်ပြတတ်အောင် ကြိုးစားမှ ထင်ပါရဲ့ .. မတော် စိတ်ကုန်သွားမှ ဒွတ်ခ :P .. အချိန်မှီသေးတယ် ထင်ပါရဲ့ .. တကယ် လက်တွေ့မှာ ခက်ခဲတာ ကြိုးစားတိုင်းပါပဲ :D .. ပါရမီ နည်းပုံများ .. :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/12/2009 12:38:00 AM 27 comments:
ကျမ ဘာအာရုံခံစားမှုမှ မသိခင်တည်းက မိခင်ရဲ့ ၀မ်းထဲမှာ နေရင်း ချက်ကြိုးကတဆင့် အာဟာရတွေကို ရယူဖူးလိမ့်မယ် .. ဒါကြောင့် အမေက ကျမအတွက် ပထမဦးဆုံး ထိတွေ့ ခံစားမိတဲ့သူ .. အမေ့ ၀မ်းထဲမှာ ၈လ ၉လလောက် သယ်ဆောင်ခိုင်းပြီး ဒုက္ခ ပေးဖူးမယ့် ကျမပေါ့ ..
အမေ့ဝမ်းက ကျွတ်ပြီဆိုတော့ နပ်စ်မ အဒေါ်ကြီးက ကျမကို မငို ငိုအောင် လုပ်လိမ့်ဦးမယ် .. ကျမကို ဇောက်ထိုးထားပြီး တင်ပါးကို ခပ်စပ်စပ် ရိုက်တယ်တဲ့လေ .. ဒီတော့ ကျမ တ၀ါးဝါးနဲ့ အော်ငိုပြီပေါ့ .. ဒါကြောင့်မို့ ကျမ မျက်ရည်ဆိုတာကို ပထမဆုံး သိရှိခဲ့လိမ့်မယ် .. နောက်ပိုင်းလည်း အလိုမကျရင် အလိုမကျသလို မျက်ရည် သွင်သွင်ကျဖူးလိမ့်မယ် .. ငယ်ငယ်ကတော့ လိုချင်တာရဖို့ ဒီမျက်ရည်ပဲ အားကိုးရလိမ့်မယ် ..
အမေက ကျမအတွက် မောင်လေးတယောက် မွေးပေးမယ်တဲ့ .. ကျေနပ်ရမှာလား .. ဒီခံစားချက်ကို မနာလိုဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ မသိခင်တည်းက ကျမ မောင်လေးကို မနာလို ဖြစ်ခဲ့မှာ ..
အမေ့ အတွက် ဒဏ်ရာ @ ကျမရဲ့ တေး မှတ် တတ်မှု
အိမ်ပြောင်းရမယ်တဲ့ .. ဖေကြီး ဘက်က အဖိုး အဖွားအိမ်ကို ဖျက်ပြီး ၄ထပ်တိုက် ဆောက်လို့ ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့ အိမ်ပြောင်းနေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ် .. ကျမ အဲဒီအချိန်က သိပ်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကို ခွဲပြီး ဘယ်လိုများ သွားရပလို့ ပူပန်ဖူးတယ် .. နောက်ဆုံး ခွဲခွာဖြစ်ခဲ့တော့လည်း နေရာသစ်မှာ အသားကျဖို့ အချိန် သိပ် မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 9/09/2009 01:54:00 PM 20 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကျမနှင့်, မိုးခါး